ချစ်သော ကိုရုပ်ဆိုး – Benedict Cumberbatch | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ချစ်သော ကိုရုပ်ဆိုး – Benedict Cumberbatch	40
ချစ်သော ကိုရုပ်ဆိုး – Benedict Cumberbatch
Posted by ဇီဇီ on Nov 25, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Entertainment, Movies/TV, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 40 comments
ဘာရေးရမလဲ လည်း ခေါင်းထဲ ဘာမှ မရှိဘူးးး
ရုပ်ရှင်ကိုက်နေတယ်လေ။ Sherlock (British drama series 2010-2015) ရှားလော့ဟုမ်း ဇာတ်လမ်းတွဲ စွဲ နေတာ။
စီဇင် ၃ ခု။ တစ်ခု ၃ ကား နဲ့ စုစုပေါင်း ၉ ကားကို ၂ ခါပြန်ကြည့်တယ်။
သူ့ အကြောင်းပဲ ပြောကြတာပေါ့နော့။
ကိုယ် က မင်းသိင်္ခရဲ့ ဆားပုလင်း နှင်းမောင်ခေတ်မှာ လူဖြစ်တာဆိုတော့ ဦးစံရှားကို ပျင်းတယ်။ ဖတ်ရမှာကို။
ရှားလော့ဟုမ်း မူရင်းကို ဘာသာပြန်ကိုလည်း ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမရောက်။
Robert Downey, Jr.(Iron Man) နဲ့ Jude Law ပါ ပြီး အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ များတဲ့ ဟောလိဝုဒ် ရှားလော့ဟုမ်းတုန်းက
သူများတွေကြိုက်ကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် က အိပ်ပျော်နေရော။
ဘယ်မှာ မိသွား လည်း ဆိုတော့ အင်္ဂလန်က ရိုက်တဲ့ ရှားလော့ဟုမ်း Sherlock (British drama series 2010-2015) ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ညိ ပါလေရော။
Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE is an English actor and film producer who has performed in film, television, theatre and radio.
Benedict Cumberbatch တဲ့။
နာဇီကုဒ် ကို ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ အလန်ကျူးရင်း အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ The Imitation Game (2014) က မင်းသားပါ။
သရုပ်ဆောင်တာကို သဘောကျတယ်လို့ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့ဖူးလို့ သိတာပါ။
နို့မို့ ကိုယ် က မင်းသား မချောရင် လုံးဝ မမှတ်မိဘူးရယ်။
အဲဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ လိုက်ရှာမိတော့……
ကျနော် ပျင်း တဲ့ The Theory of Everything (2014) က ဟောလီဝုဒ်က ရိုက်တဲ့ Stephen Hawking ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းး ဖြစ်ပြီး
အင်္ဂလိပ် ဇာတ်လမ်းတွဲ Stephen Hawking’s Grand Design (TV Mini-Series 2012) .မှာတော့ သူ က Stephen Hawking ဇာတ်ဆောင် နေရာကပါ။
ဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်တုန်း ဆို ဟောလီဝုဒ် ကား The Theory of Everything (2014) ကို ကြည့်တော့ ကိုယ်က ပျင်းလို့ လျှောက်စဉ်းစားမိတာ
The Imitation Game (2014) က မင်းသား က The Theory of Everything (2014) မှာ သရုပ်ဆောင်ရင်လည်း လိုက်မှာပဲလို့ တွေးခဲ့ဖူးလို့ပါ။
ရှာကြည့်ရမဲ့ စီးရီး စာရင်းထဲ Stephen Hawking’s Grand Design (TV Mini-Series 2012) ထည့်လိုက်ပြီ။
အဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုနေ့က ကြည့်ဖြစ်တဲ့ The Fifth Estate (2013).
ကွန်ပြူတာ ဝက်ပေ့(ချ) နဲ့ ဆိုင် တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ အများကြီး ပါတဲ့ ကားပါ။
ဇာတ်လမ်း နားလည်ပေမဲ့ စကားတွေ နားမလည်ပါဘူး
အမှန်အတိုင်း သိခွင့်ရှိတဲ့ သူ အရေအတွက်
စတာတွေ ကို ဖောက်ဖျက်ကျော်လွန်ပြီးးးး
နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတိုင်း ကို လူတိုင်းက သိခွင့်ပေးးခဲ့တဲ့ WikiLeak website စတင်ခဲ့သူ တစ်ယောက် အကြောင်းး
ဟိ.. သူ ပါတဲ့ ကားးမို့ ကြည့်တာပါ..
ခုနောက်ပိုင်း ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်နိုင်တဲ့ ကားမဟုတ်ရင် မကြည့်တတ်တာမို့
Sherlock (British drama series 2010-2015) ရှားလော့ ဟုမ်း ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကတော့ သရုပ်ဆောင် ကောင်း တာ အပြင် ဇာတ်ကောင် စရိုက်မှာ မူရင်း အမြင်ပျောက်သွားတာမို့ ကြည့်ရင်း စွဲပါတယ်။
ခုထိ ကြည့်ဖူးတဲ့ ၃ ကားစလုံး မှာ ဇာတ်ကောင် စရိုက်အတိုင်း အပီအပြင် ဝင်လို့ကို ကြိုက်မိတာမို့
ချစ်သော ကိုရုပ်ဆိုး – Benedict Cumberbatch ကို တူး လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ ပါတယ် ဆိုလို့ ကိုယ် အင်မတန်မုန်းသော..
The Hobbit (2012-2014) ကားတွေကိုလည်း ကြည့်ဖို့ ပြင်နေပါတယ်လို့။
ငိုရတယ် ဆိုလို့ မကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး ကား 12 yearsaSlave (2013) လည်း ကြည့်မယ်။
၂၀၀၈ တုန်း က ကြည့်ခဲ့တုန်းက သူ ပါ တယ် မသိလို့ The Other Boleyn Girl (2008) လည်း ပြန်ကြည့်မယ်။
HMM says: Sherlock Series ပဲကြည့်ဖြစ်သေးတယ်..
Hobbit မှာအသံပဲပါတယ်ဆိုလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂျက်စပဲရိုး says: ဟော့ဘစ် ထဲက နဂါး ကြီး ဟာ သူပေါ့။
ဟိုတလောကတောင် သူ နဂါး အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် နေပုံ ယူကျု မှာ တက်လာသေး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ ၂ ယောက် မြန်ထာ ကျန်းးး
မသိရင် နာက အနား ခေါ်ထားပြီး မန့်ခိုင်းသလိုလို။
ဟွာ။ ဘုရင်လုပ်တဲ့ တစ်ယောက်ဆိုလားပဲ
မမဂျီးက အဲဒီ ကားတွေ အားဂျီးမုန်းတာ ဘာမှ မသိ။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဘုရား ဘုရား ဒီမင်းသား တော့ မခြောက်သွားပါစေနဲ့…း)
ဒီတစ်ယောက် အခြောက် အနေနဲ့ ပါ တဲ့ ဇာတ်လမ်း တော့ ၂ ခု ရှိနေပြီ။း)
ကြိုက်လိုက်ရင် ဟိုလို လူကြမ်းကြီးတွေကို မကြိုက်တာ။
ဒီ တစ်ယောက်တော့ ရုပ်ကို ထက် အမူအရာကို ကြိုက်ရာက စွဲလန်းတာပါပဲ။
HMM says: မီးမစိလယ်..
မားချွိကျိန်စာ အားကောင်းလို့ လုံးရာကပြားရင်တော့ မသိ :P
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၂၀၁၅ ကမှ ယူတာဆိုလားဗျဲ
ဦးကျောက်ခဲ says: 12 YearsaSlave မှာလည်းပါတယ် …
အာဟိ… ရူပါရော သရုပ်ဆောင်ရော သိပ်မငြိသေးဘူး…
သူ့ဓာတ်ရှင်တွေ ရှာကြည့်ဦးမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ ကားကို ကိုကို ကျောက် ညွှန်းသေးတယ်.တယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီနှစ်ထဲကြည့်တဲ့ ဓာတ်ရှင်တွေထဲမှာ…
12 YearsaSlave ကို အကြိုက်ဆုံး…
ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်ထဲ ပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ၆ပေ့စေ ၆ပေစေ့ အိုက်ရုပ်ဆိုးရီးတော့… နာ့ နတ်ဘုရားလေး Thor ကိုထိနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂျက်စပဲရိုး says: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3329688/Chris-Hemsworth-virtually-unrecognisable-reveals-incredible-transformation-new-film-Heart-Sea.html
နတ်ဘုရား လဲ ပြားချပ်ချပ် ဖြစ်သွားရှာပြီ။
ဇာတ်လမ်း အသစ် အတွက် ဆိုပဲး)
Shwe Ei says:ံမြင်ရတာစိတ်တောင်မကောင်းဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: နတ်ဘုရားက The Huntsman ကား အသစ်ထွက်လိမ့်မယ်။
Wow says: Instagram က ပုံက ဆိုးထှာ…. စနိုးဝှိုက်မပါချင်နေ The Huntsman ကတော့ အားပေးရမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ရှားလော့ခ်ကို မချွိညွှန်းလို့ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း စွဲနေပြီ…။
ဦးစံရှားစာအုပ်ကို ၀တ္ထုတိုတစ်အုပ်လုံးကိုင်ထားလို့…. ဒီရှားလော့ခ်ကို အကုန်မှီးထား ချဲ့ထားတာကို ပိုပိုသိလာတယ်…..။
ရှားလော့ခ်ဆီမှာ… သူ့ဦးနှောက်နဲ့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…။ တခါတခါ မရပ်မနားစကားပြောတတ်တာကိုတော့ ဂျွန်ဝပ်ဆန်လိုပဲ မုန်းတယ်… ကိုယ့်ချစ်ချစ် မဲနေတဲ့ဂစ်ပဆင်ကြီးထက်တော့ ပိုမချစ်သေးဘူး… ရှားလော့ခ်လဲ ဦးနှောက်ကောင်းနေတဲ့အရူးတစ်ယောက်နဲ့တူတာတော့ သတိထားမိ….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးလာတိုင်း ဒီကားကိုအရင်ရှာမိ စွဲနေတာတော့ အမှန်ပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
အဲဒီ စရိုက်ကို ပေါ်အောင် ရိုက်နိုင်တယ်လေ။ဟိ။
သူတို့ ကြားက သံယောဇဉ်ရယ် အမြင်ကပ်တာရယ်ကိုလည်း ရောသမမွေနိုင်တယ်။
ဟောလီဝုဒ်က ရိုက်တဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းကတော့ အမြင်ကပ်စရာ။
Shwe Ei says: -သာမီးက Robert Downey Jr. ကိုအမြင်ကပ်တာ
-ဘယ်ဘွကရေစက်မှန်းကို သိဘူး :D
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့.။
Mike says: .ရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းမကျိရတာကြာပီ…၀ယ်ကျိအုံးမှပါ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွန်မွန့် ဆီမှာ အခွေပေးလိုက်တယ် မိုက်မိုက်။
မြစပဲရိုး says: အရီး ရဲ့ မြီးကောင်ပေါက် နဲ့ သာ ပေါင်းထားပေးချင်တော့တယ်။
သူ့ အခန်းထဲ ရှားလော့ Wall paper နဲ့။ Wall paper က Small size မို့ သာတော်တော့တယ်။ lol:-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဗျစ်ဒစ်(ရှ) မင်းသားတွေကို မကြိုက်တတ်ဘူး ကြွေးကြော်ထားပြီးမှ
အောင် မိုးသူ says: ရှားလေ့ခ်ဟုမ်း စီးရီးတော့ ကြည့်ချင်တယ် မကြီးရေ ဒါပေမယ့် အင်းဂလိပ်ကို မကျွမ်းကျင်တော့ စာတမ်းထိုးလေးများရှိရင် ကောင်းမှာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွန်မွန့်ဆီမှာ ငှါး ပါ။
စာတန်းမထိုးလည်း ဗျစ်ဒစ်(ရှ) စကားက အတော်ရှင်းပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အာ့ဆို ငှားလိုက်မယ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟီလီနီသဲဆီ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း..
မောင်ဘလိူင် says: Black Mass မှာလည်း သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဂျော်နီဒပ် က ဘော်စတွန်က လူဆိုးခေါင်းဆောင်
ဂျိမ်းစ် ဝှိုက်တီ ဘော်ဂျာ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ ဘန်နီဒစ် ကတော့ လူဆိုးညီ မက်ဆာချူးဆက်
လွှတ်တော် အမတ်တွေရဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ဘန်နီဒစ် ရဲ့ အခန်း နည်းပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: Black Mass က ထွက်ပလားးး
သူ့ကို လိုက်ရှာရင်း တွေ့လိုက်လို့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ချစ်သော မမဂျီး.. လူကြုံရှိရင် ရှိသမျှကားတွေ စီဒီထဲ အကုန်ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့စ်စ်..
အာဘွား အမြှောက် တစ်သိန်း.. :kiss:
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေးးလိုက်မယ်..
လုံမလေးမွန်မွန် says: သူ့ကို ဘယ်လိုချစ်မှန်း မသိဘူး..
အာ့ကျန်ခဲ့လို့ လာပြောတာ.. သိလား..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောပြလိုက်မယ်နော်
Mr. MarGa says: ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ခေတ်မှာ လူဖြစ်လာပြီး ဦးစံရှားကို ပျင်းတယ် ဆိုတော့ကာ
ဦးစံရှားကိုပဲ တမ်းတမ်းစွဲ ဖြစ်ပြီး ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ကို လှည့်တောင်မကြည့်တဲ့ ကျနော်က ဘယ်ခေတ်ကိုရောက်သွားလဲ သူ့ဇာတ်ကားတွေထဲ
the fifth estate ကတော့ ကြည့်ပြီး ဖျက်တဲ့ထဲ ပါသွားတယ်
The other Boelyn Girl နဲ့ Star Trek into Darkness ကတော့ မကြည့်ရသေးဘူး
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဆန်းးပါဘူးး
နိ က နာ့ထက် အသက်ကြီးး ဒလေ.. လုံမလေးးး
တဂျားးဆီမယ် အခွေတွေ ရှိသတဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: မြင်မိသမျှတော့ Hobbit ကလည်း Martin Freeman ပဲဟုတ်..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့..
ဟောလီဝုဒ် ကို တစ်ဖွဲ့လုံးးရောက်လာပုံပဲ
သံကွင်း says: ဝှအီတွက်
ခြစ်သော မယ်ခြောက်ဖုတ်နဲ့ မြတ်နိုးသော ဟောင်ခေါင် ဂျက်မ ဆိုပြီး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေါက်ဖော်အီတွက်
ချိသော နခြောက်ဖွတ်နဲ့ ဂက်အိုးမီးဖို ဆိုပြီး ရေးပေးမီနော်။